बलात्कारीलाई सार्वजनिक ठाउँमा गोली हानेर हत्या गरियो ! « The News Nepal
बलात्कारीलाई सार्वजनिक ठाउँमा गोली हानेर हत्या गरियो !
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला दिनहरुमा बलात्कारका घटनाहरुमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा भएका कानुनहरुको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपराधि खुलेयाम हिड्ने र पिडितले लुक्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यस्तै, यमनमा १२ बर्षका एक किशोरमाथि बलात्कार गरि हत्या गरेको आरोपमा २ युवकलाई सार्वजनिक स्थलमै गोली हानि हत्या गरिएको छ । २८ बर्षीय वाडेह रफट र ३१ बर्षीय मुहम्मद खालिदलाई सार्वजनिक स्थलमा गोलिहानि हत्या गरिएको एजेन्सीले जनाएको छ ।
मोहम्मद साद नामका बालकमाथि ति युवकले गत मे मा बलात्कार पछि हत्या गरेका थिए । बिहिबार अदन सहरमा आर्मीले उनीहरुलाई गोली हान्दा हजारौं मानिसहरु समेत उपस्थित थिए। आर्मिले गोलि हान्नु अघि उनीहरुलाई पानि पिउँन दिइएको थियो । पेडोफिलिया९बालबालिका प्रती हुने यौन आकर्षण० रहेका ति दुई युवकले बालक आफ्नै घरमा खेलिरहेको अवस्थामा अपहरण गरि बलात्कार र पछि हत्या गरेका थिए।
ति दुई युवकहरुलाई हत्या पछि बालकको शव लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा एक ३३ बर्षीया महिलालाई पनि मृत्युदण्डको सजया सुनाइएको डेलिमेलले जनाएको छ । उनी गर्भवती भएकाले उनलाई फाँसी दिने समय पर सरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्लामिक सारिया कानुन लागू हुने यमनका कतिपय ठाँउमा हत्या ,बलात्कार ,आतंकवाद जस्ता मुद्धामा मृत्युदण्ड दिइने गरिएको छ । एजेन्सी